Company Overview - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.iri muna Building 38, Jinguo maindasitiri paki, No. 500 Zhenkang mugwagwa, Jinshan dunhu, Shanghai, tine makore anopfuura 15 nyanzvi CNC machine ruzivo mu Shanghai, kunyanya CNC azvikuya, CNC kutendeuka, Turn-azvikuya machine, CNC machine, 4/5 akabatana CNC machine, Surface kukuya, Laser nokuveza, Sheet simbi vachikotama nomoto uye zvichingodaro. Kambani yedu inovhara nzvimbo inosvika 1,200 mativi emamirimita, huwandu hwevashandi hwangangoita makumi matatu, gumi mamaneja emagetsi, mashanu evanoongorora. Main kugadzirwa michina zvinopfuura 30 nemhando.
Zvinoumba CNC Machine
1. Zvinhu zvakakurumbira zveCCC machine
Izvo zvakakosha kuti uzive pano kuti CNC michina yekushandisa inowanzo kuwanikwa ne otomatiki chishandiso chinja chinobata uye inodzorwa nechirongwa. Nekudaro, zviri pachena kuti mashandiro acho anonyanya kuve akasikwa muzvisikwa. Pamachina ese eCCC, yemagetsi yekuyera sisitimu inoshandiswa pane yega yega inodzorwa axis. Masystem ekuyera anowanzo shandiswa pamushini weCXNC wekuona kumisikidzwa kwesiraidhi pasiraidhi.
Aya masisitimu anoitawo basa rakakosha mukumisikidza tafura yekurukisa uye kuyera iyo chaiyo spindle kumhanya. Zvidimbu zveCCC ndizvo zvakakosha zveCCC machine. Iwo matsva eCCC ekudzora akagadzirwa kuitira nyore manyorerwo ane chekuita nekushandura machining nzvimbo uye kukuya. Kune rimwe divi, makomputa epamberi ekuverenga manhamba anotendera kunyatso kudzora mbezo dzakasiyana, zvichivagonesa kupatsanura zvinzvimbo nekukurumidza. Saka ngatitorei tarisa pane mamwe makuru maficha eCCC machining.
2.Mashandisi ekugadzirisa masisitimu
Zvakakodzera kutaura pano kuti iwe unogona kuwana kuvimbika kwenguva yakareba kubva kumushini chishandiso iyo inotsamira pane yakajairwa yekugadzirisa uye lubrication purogiramu. Icho chinhu chinowanzoonekwa kuti kusakwanira lubrication kumatombo kunogona kukonzera kukurumidza kukurumidza kwavari. Uyezve, kusakwanira lubrication kunogona zvakare kukanganisa njanji njanji. Mune mamwe mazwi, kana paine kushayikwa kwekuzora, kudzikama kwemuchina kwaizoderera.
Kazhinji, kugadzirisa mari inoenderana nemichina yeCCC inodhura zvakanyanya. Nekudaro, zvine musoro kusarudza iwo maCNC michina ayo akashongedzerwa neako-yega lubrication mashini. Iyo inonziwo otomatiki lubrication, uko yega yega yekutakura kwechigadzirwa yakabatana kune yepakati manifold. Iyo lubrication dispenser inopa otomatiki uye yakamanikidza mafuta feed kune yega yega inobereka.
3. Kuchinja kweCCC machine process kuri nani
Mushure mekugadzirisa uye kuongorora maitiro ekucheka bvunzo, iko kuchinjika kweiyo CNC michina inogona kutumirwa kuchengetedza yakanyanya nguva uye kuona mhando panguva imwe chete. Zvakare, maitiro acho anogona kushandiswa se template yekugadziriswa kunotevera kwezvimwe zvakafanana zvikamu. Nekudaro, iine mafambisirwo maficha eCNC michina, akasiyana mafirifomu mukati mekambani anogona kugadziridzwa.
4. Chokurukisa nzira muna CNC machine
Ose matatu-akabatana uye mashanu-akabatana CNC michina ine yakawedzera huwandu hwesarudzo kana mamiriro acho ari pamusoro pezvakarukwa. HSD uye Perske spindles zvatova hombe hit munzvimbo yeCCC michina. Dzinoshanda uye dzinogona kutora mitoro nekuvimbisa yako chaiyo chaiyo panguva imwe chete. Zvakare, pombi dzekutsva dzinosarudzika ficha muCCC michina. Pombi dzekutsvaira dzinopa simba uye kugadzikana kune iyo CNC muchina setups.
5.Michina yekushandisa yakareba urefu
Automated turu urefu setter inogona kuita iyo 3-axis uye 5-axis CNC michina kuti ibudirire. Iwo marefu ekuyera masisitimu akanyanya kwazvo. Uyezve, ivo vanoumba imwechete M-Code iyo inoita kusarudzwa kwechishandiso munzvimbo ine otomatiki. Uyezve, chishandiso kumisikidza kune yekuyera yekuyera chinzvimbo inogona kugadzirwa zvakanaka nerubatsiro rwe otomatiki chishandiso urefu setter. Kana bvunzo yaona muchina, iyo yega yakayerwa turu kureba inochengetwa otomatiki muFagor chishandiso tafura yekukanganisa.
6. Fagor Kudzora
Kudzora kwefagor zvakare chikamu chakakosha che3-axis uye 5-axis CNC michina. Kunyangwe mizhinji michina yeCCC ichiuya yakashongedzerwa neiyi mashandiro, vamwe vagadziri havaiise pamberi mumashini eCNC. Kana yako CNC muchina isina Fagor Controls, zvingave zvakanaka kuitenga kubva kune chero wechitatu-bato mutengesi.
7. Zvakakosha kumhanyisa bvunzo usati watanga neyakagadzirwa nzira
Kuti ive chaiyo, iyo yekumhanyisa nguva nharaunda yeCCC machining yakanyanyisa kuita. Ichi ndicho chikonzero icho munhu anofanirwa kubhadhara kutarisisa kwakakodzera kune chengetedzo uye mhando. Mune mamwe mazwi, maitiro ekugadzirisa akanangana neCNC anofanirwa kusangana nemashandiro uye nzira dzekugadzira muyedzo yekuyedza. Miedzo yekuyedza usati watanga neyakagadzirwa nzira inokusevha kubva kune akawanda matambudziko.
1. Ouzhan ine anopfuura makumi matatu seti yemhando yepamusoro CNC michina, mazhinji acho anotumirwa kubva kuSwitzerland neJapan, kunyatsoita kwedu kunogona kusvika 0.01mm.
2. Ouzhan parizvino ine vanopfuura vashandi makumi matatu uye vanopfuura gumi% vaneMasters kana madhigirii eDhokotera. Mainjiniya edu gumi vakapedza kudzidza kubva kumusoro maChinese mayunivhesiti makuru mumachini uye vane hupfumi hunyanzvi ruzivo.Vedu vekutengeserana vekunze vashandi vekunze vehunyanzvi vanopedza kudzidza, vane hunyanzvi mukutengeserana kwekunze process.Madhipatimendi maviri ekambani yedu anogona kubatsirana uye kukuunzira yakanakisa sevhisi. .
3. Ouzhan ine yayo CNC machining fekitori, sezvo yedu fekitori yakavambwa muShanghai mu2005, isu takashandisa makumi emakumi emakore ehupfumi ruzivo uye ruzivo muCNC machining munda kuhwina kuzivikanwa kwevatengi vazhinji. Senge Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco zvichingodaro.